Sararaa fi Kabala Rigdoo
Sararaa fi Kabala Rigdoo ajajaawwanii fi dirqalawwan isa ati mul'annoo ammaa irratti fayyadamuu dandeessuu of keessaa qaba.
Sarara filatameef dirqaalalee dhangeessuu qindeessa.
Kamsha MataaXiyyaa bani. Akkaataa xumura sarara filameef ibsuuf mallattoolee mul'ataa fayyadamuu dandeessa.
Amaloota guutuu fakkaasaa wanta filatamee qindeessa.
Akaakuu guutaa fakkaasa wanta filatameef fayyadamuu barbaadde fili.
Haalataa / Guutinsa Naannoo
Gaaddidduu wanta filatameef dabala yoo wantichi duraanuu gaaddidduu qabaate, gaaddiddichi haqameera. yeroo wanti hin filatamne yoo qabduu kana cuqaastu, gaaddidduun wanta ittaanuu kaafteetti dabalameera.
Title is: Sararaa fi Kabala Rigdoo